Ogige Ugwu Safari ọhụrụ nke Tanzania
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ogige Ugwu Safari ọhụrụ nke Tanzania
News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ogige safari nke anụ ọhịa Tanzania
Na-eme ememe Tourbọchị njem nleta nke Africa, A na-ewepụta atụmatụ iji kwalite ogige ntụrụndụ safari anụ ọhịa nke Tanzania nke guzobere ugbu a n'etiti ogige ntụrụndụ safari kachasị mma n'Africa.
Guzobe afọ gara aga, Ogige Nyerere National Park ugbu a na-enwe mmepe nke ga - eme ya n'etiti ogige ndu safari kachasi ndu n'Africa site na oke ya na ihe omuma ndi ozo di iche iche, otutu ndi anumanu anumanu Afrika.
Kọmishọna na-ahụ maka nchekwa nchekwa ogige mba Tanzania, Maazị Allan Kijazi kwuru na e nwere atụmatụ iji mee ogige a na Southern Tanzania ka ọ bụrụ ebe kachasi mma n'etiti ogige ntụrụndụ safị anụ ọhịa dị n'Africa.
Kijazi kwuru na Ogige Nyere Nationalyere ọhụrụ nke Nyerere ga-ewu ewu karịa n'ihi ọtụtụ anụ ọhịa na anụ ndị ọzọ dị ndụ na-ahụghị ebe ọ bụla n'ụwa. Ebumnuche bụ ime ka ọ dịrị n'etiti saịtị ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ iji kpọọ ọtụtụ ndị njem nleta, ọkachasị ndị hụrụ ezumike n'anya.
A na-eji ahịhịa ọla edo, oke ọhịa savannah, ọdọ mmiri ndị dị na ọdọ mmiri, na ọdọ mmiri ndị na-enweghị nsọtụ chọọ Nrịre Ugwu Nyere nke Panorama mma. Osimiri Rufiji, nke kachasị ogologo na Tanzania, gafere ogige ahụ na mmiri ya na-acha aja aja na-asọba n'Oké Osimiri India. Osimiri ahụ na-agbakwunyekwu ịhụnanya n'ogige a kacha mara amara maka ọtụtụ puku agụ iyi, na-eme ka ọ bụrụ mmiri iyi kachasị agụ iyi na Tanzania.
Ewezuga enyí n’ọzara ya, ogige ahụ na-echekwa hippos na buffalo buru ibu karịa ogige ọ bụla ọzọ a maara nke ọma na mpaghara Africa niile. A na-agụ ogige ahụ otu n'ime ogige ntụrụndụ kachasị ukwuu n'Africa na usoro ihe ọmụmụ na usoro ndu, nke nwere ụdị anụ ọhịa dị iche iche kachasị mma maka safaris foto.
Ihe kariri umu nnunu 440 achoputara ma dekọọ ha n'ime ogige a, na -eme ya paradaịs maka ndị nnụnụ hụrụ n'anya na-ahụ n'anya. Umu anumanu ndi ahuru n’ogige a bu ndi pelicans nke nwere pink, ndi bu azu, ndi skimmer nke Africa, ndi na-a whiteu a whiteu na-acha ocha, ndi ozo, ndi anakpo na-acha odo odo, ndi na-acha odo odo, ndi na-acha odo odo, Malagasy squacco heron, opi mpi, ugo azu , na ọtụtụ nnụnụ ndị ọzọ si Africa.
Ndị ọbịa nke ogige a buru ibu ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ihe omume safari na mba ahụ, dị ka ndị njem ụgbọ mmiri na Osimiri Rufiji yana draịva egwuregwu, njem ndị njem, na njem njem mara mma.